Nagu Saabsan - Jiangsu EBIL Sirdoonka Kaydinta Sirdoonka Co., Ltd.
FARSAMADA FARSAMADA TABABARKA EBIL
Is dhexgalka Jiangsu EBIL Sirdoonka Teknolojiyada C, hirgelinta mashruuca iyo iibinta ka dib xarun xarun oo ku taal Gaochun Nidaamka Tiknolojiyadda Sare ee nidaamka qorshaynta iyo is-dhexgalka, wuxuu bixiyaa talbaaraha orodka, qalabka xamuulka qaada, RGV gaari c koox farsamo oo adag iyo q-sare iyo shaqaale adeeg, iyo in kabadan 40 farsamoyaqaan, ele cusub iyo R&D. Kaliya kuma leh cilmi baaris u gaar ah iyo Jaamacadda Zhejiang, Jaamacadda South East, South China U si joogto ah ayey u sii xoojineysaa xoogga farsamada ee alaabooyinka 'EBILTECH' oo ay ka gudbeen shahaadooyinka soo-dejinta barnaamijyada kombiyuutarka ee ISO. Alaabada ayaa si balaadhan looga isticmaalaa m baabuur, samaynta waraaqaha, alaabta guriga, dhuxusha, dawada, saadka log iyo warshadaha kale. Waxay si wanaagsan u soo dhoweeyeen JOINTOWN Pharmaceutical Group, Huaying Group, VASE Tan iyo aasaaskeedii, EBILTECH wuxuu koray dhakhso marka hore, macaamiisha ugu horeysa "meheradda ganacsiga, u furnaanta iyo sameynta dadaallo aan kala go 'lahayn si loo abuuro mustaqbal wanaagsan.
1.Aim: Macaamiil marka hore, daacadnimo marka hore.
2.Olosha Falsafadeed: Heersare, Hal-abuur, la dhaqaaq waqtiyada
3.Curjiin: Shaqaaluhu marka hore work shaqo faraxsan, nolol caafimaad leh.
4. Falsafadda Falsafadda: akhlaaqda suuban-ka-beddel fikirka ， dhammaystir u yeelo
5.Team Ruuxa: Midnimada iyo u hibeynta, wada noolaanshaha, waligaa ha quusan.
6.Team Qiimaha: shaqsi ahaan iyo koox ahaanba sida gorgorka.
7.Vision: Si aad u noqotid alaab-qeybiyeyaal bakhaarro caan ah oo caan ka ah adduunka
8. Qiimaha Isfahamka: U abuur macmiil, mas'uul ka ah riyadeedu sidaa tahay.
Balanqaadyada adeegga iibka-iibka:
Balanqaadka adeegga iibka:
Waqtiga keenida la hubo:
Go'aanka adeegga iibka ka dib:
(1) Soosaaraynta iyo kormeerka baaba'ida, dhammaan habraacyadu waxay leeyihiin diiwaanno tayo iyo xog ogaal ah.
(2) Shelefyada ayaa la buuxin doonaa, la rari doonaa oo la rari doonaa iyadoo la raacayo heerarka warshadaha ama soo-dejinta badeecadeenna dhoofinta caadiga ah ka dib kormeerka adag.
(3) Marka la eego shuruudaha loo siman yahay, warshaddeena ayaa hubin doonta tayada badeecada iyada oo ku saleysan sii wadida waxqabadka farsamada ee badeecada mana beddeli doono waxyaabaha wax soo saarka, waxaan kalsooni fiican ku qabnaa inaan ku siino qiimaha ugu doorbidan.
(1) Adeegsiga qandaraas mideysan oo 《alaabooyinka warshadaha》 la saxiixdo qandaraas.
(2) Si taxaddar leh u hoggaansan qodobbada sharciga heshiiska, loo hubiyo waxqabadka wanaagsan ee heshiiska iyo heshiiska farsamada.
(3) Si loo dammaanad qaado tayada badeecadaha baandooyinka, dhammaan agabyadu waxay isticmaalaan sheyga sheyga shelf ee guryaha ama noocyo caalami ah oo caan ah oo leh tayo sare, iyagoo ku siinaya alaabo tayo leh jadwalka, iyo adeegsiga qaabka gaadiidka, si loo hubiyo inaad heshay. badeecadaha ku jira xaalad wanaagsan.
(4) Xiriir firfircoon oo lala yeesho macaamiisha, xushmee qaabka macaamiisha, si loo siiyo macaamiisha taageerada farsamo ee fikirka leh.
(5) Sida ku xusan shuruudaha heshiiska si ay kuu siiyaan kormeer, rakibid, guddi iyo adeegyo tababar.
(1) Wakhtiga keenida waxsoosaarka: marka loo eego shuruudaha macmiilka, haddii aad leedahay baahiyo gaar ah sida mashruuc ubaahan in la dhammeeyo waqti hore, waxaan sameyn karnaa adeeg gaar ah wax soo saar, rakibida si loo daboolo baahiyaha macaamiisha.
(2) tilmaamaha dayactirka farsamada (2) sawirrada guud ee rakibidda (3) liistada tilmaanta qaybaha (4) waxay bixiyaan qaybo xiro, liiska waxyaabaha dheellitirka ah, oo ay weheliso xaddiga lacageed oo gaar ah.
(1) Ujeedada adeegga: daacadnimo, dhaqso, go'aan qaadasho, sax, iyo fikir.
(2) Ujeedada adeegga: adeegga marka hore iyo macaamiisha marka hore.
(3) Karti adeeg: Alaab-qeybiyuhu wuxuu helay wicitaanadii markii mashiinku guuldaraysto, shaqaalaha dayactirka ayaa goobta imaan kara 48 saacadood gudahooda waxayna bilaabeen inay dayactiraan.
(4) Mabda 'Adeeg: dayactir 1 sano ah oo bilaash ah, adeeg cimri dheer ah, waqti dheer oo la siinayo alaabo dheeri ah, bixinta hagaajin injineernimo, iyo casriyeynta alaabada cusub.
a. Awoodda cilmi baarista iyo kobcinta, waxaan awood u leenahay in aan soo saarno alaabo tayo sare leh oo cusub oo loogu talagalay mashruucyada iskaashiga.
b. Heerka xakamaynta tayada: si buuxda ayaan u hirgelinnaa ISO9001: 2000 nidaamka maareynta tayada.
c. Adeeg waqtiga iyo fikirka ah, waxaan si adag u fulinaa ballanqaadyada adeegga iibka.
d. Waxqabadka alaabada oo la isku halleyn karo: waxaan diyaar u nahay inaan la tartano soosaarayaasha kale si cadaalad ah.
Muddada damaanad qaadka ah, shaqaalaha farsamada ee shirkaddeenu waxay sameyn doonaan xog ururinta booqashada sannad walba.
Haddii aad ku qanacsan tahay, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto.
Cabashada emaylku waa ： services@ebiltech.com Bena （qofka lala xiriirayo）
Wadada Shanaad , Qalabka Birta , Xidhitaanka lakabyo Badan , Xarig , Suuqa Suuqa , Asal aamisan ,